Fiainana mpilalao baolina kitra :: Tantaram-pitiavan’i Faneva Ima sy ny Barea • AoRaha
Fiainana mpilalao baolina kitra Tantaram-pitiavan’i Faneva Ima sy ny Barea
Nifampiraharahana ny mpanazatra nasionaly, Nicolas Dupuis, teny mahamasina omaly, rehefa nangataka ny hiresadresaka amin’Andriatsima Faneva Ima, mpilalaon’ny ekipam-pirenena malagasin’ny taranja baolina kitra (barea) ny mpanao gazetin’ny ao raha. Teo am-piomanana ny hiatrika ny fanazarantena ireo mpilalao efa eto an-toerana, no iny I Faneva ima nanatona anay tamim-pitsikitsikiana rehefa nomen’iry teknisiana frantsay fahazoan-dalana.
Hijanona tsy hilalao ao amin’ny Barea intsony mantsy i “Rakapy” (solon’anarana nampalaza azy nandritra ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na CAN 2019 farany teo), aorian’ny lalao hihaonan’ i Madagasikara sy Etiopia, etsy Mahamasina, amin’ny sabotsy ho avy izao. Tsy ny minitra maromaro nifampiresahana tamin’i Faneva Ima no ampy hamintinana an’ireo 14 taona naharetan’ny fiarahan’ity loha­laharana malagasy ity sy ny Barea. Teboka vitsivitsy nefa manaporofo ny firaiketan-dRakapy am-po tamin’
ny ekipam-pirenena malagasy no ezahina hozaraina amintsika mpamaky etsy ambany.
Hanan-tantara amin’ny fiainana niaraka tamin’ny taranja baolina kitra ho an’i Faneva Ima ny datin’ny 16 novambra 2019. Amin’io sabotsy io no hisalorany farany ny fanamian’ ny ekipam-pirenena malagasy (Barea). “Teto amin’ny kianjaben’i Mahamasina no nanombohako ny lalao iraisam-pirenena niaraka tamin’ny Barea, 14 taona lasa izay,ka rariny loatra raha eto ihany koa no hamaranako azy amin’ny sabotsy”, hoy Rakapy, omaly.
Mahalala onony ny lehilahy. Mbola mpilalao baolina kitra matihanina izy, amin’izao faha-35 taonany izao, saingy notsoriny fa efa nahazo taona izy. “Nandinika efa ela aho ary nieritreritra tsara. Tamin’ny taona 2005 no niantsoana ahy voalohany tao anatin’ny ekipam-pirenena. Fotoana izao mba hitsaharana sy hanomezana sehatra ho an’ireo zandry indray. Afaka manohy foana aho raha mbola te hilalao hiaraka amin’ny Barea, saingy tsy ho hita mihitsy ireo zandry ho mpandimby raha hidongy toerana eto. Aleo izy ireo indray no hampiseho ny traikefany”, araka ny fanazavana sy hafatra nataon’Andriatsima Faneva Ima, tetsy Mahamasina.
Toy ny vao omaly no ahatsiarovan-dRakapy an’ilay antso voalohany ka nidirany tao amin’ny Barea. “Tadidiko ny fisian’izay fientanam-po na “adrenaline” izay. Tsy miala mihitsy izy io isaky ny hiakatra kianja. Nifandona tamin’ny ekipa avy any Belzika izahay tamin’izany. Mbola tena sahirana be anefa aho tamin’izany fotoana izany, indrindra tamin’ny lafiny filalaovana baolina mihitsy. Maro ihany koa ny fitavozavozana tamin’ny lafiny famonoam-baolina. Roa taona taty aoriana, mbola tao foana ilay “adrenaline” tany am-boalohany, miampy ny traikefa ka tena tafiditra tsara tao anatin’ny lalao amin’izay”, hoy ny fitantaran’i Faneva Ima fohifohy ny fanombohany tao amin’ny Barea.
Ejipta : tsy hadino mandrakizay !
Hitoetra ho fahatsiarovana tsara indrindra kosa ny vokatra tsara azon’i Madagasikara nandritra ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na ny CAN 2019 farany teo, tany Ejipta. “Nanana ny toe-tsaina tsy manaiky ho resy intsony aho mialoha ny dingana fifanintsanana. Fa ahoana kosa moa isika Malagasy no hanaiky ho resy foana? Izany indrindra no niantsoako an-dry Razakanantenaina na i Bapasy sy ry Nomenjanahary Lalaina na i Bôlida sy ireo mpilalao hafa hoe : andao isika hiady mba ho tafakatra CAN amin’izay. Iny moa ny vokatra avy eo. Izay ihany koa no hanentanako an’ireo Malagasy rehetra mba hiray hina hatrany fa tsy amin’ny baolina kitra fotsiny ihany”, hoy ny lehilahy tsy nihambahamba.
Resy, nefa tsy maintsy mitraka…
Toy ny kodiaran-tsarety ny fiainana: misy ny ambony, misy ny ambany. Tsy ilaozan-java-mahaory na amin’ny tonto­lon’ny fanatanjahantena tahaka ny baolina kitra aza. Matetika, nangidy tamin’ity mpilalao ity hatrany ny niai­nana an’ilay fihetseham-po tsy maintsy manaiky tamin’ireo vanim-potoana nahalavo ny Barea ka tsy nahatafita azy tamin’ny CAN. “Mafy ny mie­ritreritra an’ilay hoe tsy misy azo atao afa-tsy ny manaiky fa raraka. Betsaka ireo toe-javatra nandalovana tao anatin’izay taona maro izay saingy io fahalavoana eo an-tokonan’ny CAN io foana no tena tsapako fa fahatsi­arovana ratsy indrindra tamin’ny filalaovako baolina kitra. Soa fa nahay niezaka niala tamin’izany fanekena ny faharesena izany ny ekipa Malagasy. Inoako fa mbola ho betsaka ny amin’ny sisa”, hoy ihany Rakapy
Raikitra sary ao an-tsaina
Mpampidi-baolina ity mpilalao isan’ny tian’ny Malagasy ity. Isan’ny raikitra sary ao an-tsaina ireo baolina roa tafidiny niaraka tamin’ny Barea sady faritany fa tsara indrindra. “Tadidiko tsara ny baolina matiko, tany Ginea Ekoatôrialy, indrindra fa nahazoantsika ny fandresena sy nampitombo ny fanantenana ny mba hiakarantsika amin’izay any amin’izany CAN izany. Mitovitovy tamin’io baolina matiko io, satria samy manan-danja, ilay tafiditro tamin’ny lalao tamin’i Kongô, tany Ejipta. Nampikobana ny haraton’ireo mpilalao kongôley aho, ka nahatafita ny ekipa malagasy tamin’ny dingana ampahefa-dalana”, hoy izy.
Tsy nitsahatra nitsiky i Faneva Ima, nanomboka tamin’ny fiandohan’ny resaka nifanaovana taminy ka hatramin’ny fotoana nifanaovana veloma taminy sy namonjeny an’ireo namany tamin’ny fanazarantenan’ny Barea, tetsy Mahamasina, omaly. Inoana ny hisian’ny tsy ampoizina ho fisaorana sy fankasitrahana ny zava-bitany tao anatin’ny ekipam-pirenena, amin’io lalao farany hataony miaraka amin’ny Barea, amin’ny sabotsy, etsy Mahamasina io. Maherifo izy, raha ny famaritana ataon’ireo mpitia baolina kitra azy. Mbola mitohy kosa ny filalaovany baolina kitra amin’ny sehatra matihanina any amin’ny klioba Abha club, any Arabia Saoudita.
Misaotra Ima Faneva. Misaotra Rakapy.
Fanofanana mpilalao Hanokatra sekolin’ny baolina kitra vehivavy ny Ajesaia Ivato
Baolina kitra – CAN 2021 :: Be mpijery ny fanazarantena nataon’ ny Barea tetsy Mahamasina
Nifandrombahan’ny mpijery ireo mpilalao